Baakadaha Cillad -Raadka ee Shiinaha ee Dhumucda leh Gacan -gacmeed 25mm 3d Mink Eyelash warshad iyo soo -saareyaal | Weiti
1, Darajada sare 100% dhogor mink dhab ah
2, Xirfad ahaan gacanta lagu sameeyay si loo hubiyo tayada ugu fiican
3, 25mm jeedal dheer oo qaro weyn leh
4, Dib loo adeegsan karo oo soconaysa ilaa 25-30 jeer isticmaalka
Dheer & Dhumuc & Fudud
Indhahaaga kor ugu qaad karbaashyada indhaha ee beenta ah
Fudud oo dib loo isticmaali karo, gacan-ku-samayska, jeedal aan naxariis lahayn ayaa ku habboon munaasabad kasta iyo qaabka isha; waxay ku dari doonaan mugga, qoto-dheeraanta iyo qeexidda natiijooyinka muddada-dheer, tusidda joojinta.
√ Gacan lagu sameeyay, kaamil ah
Indhashareerka been abuurka ah ee 25mm mink-ka ah dhammaantood waa xirfad-gacmeed, waxaan fiiro gaar ah u leenahay tayada ugu fiican, si qalooca iyo duubka indhuhu u yihiin dabiici. Baaritaannadayada beenta ah waxay si fiican isugu daraan indhahaaga dabiiciga ah, waxay kordhiyaan dhererka iyo mugga, waxayna abuuraan muuqaal qurux badan. Waxaa loo sameeyay si kor loogu qaado quruxdaada iyo shakhsiyaddaada.
√ Dib loo isticmaali karo oo raagaya
In kasta oo indhashareerka mink ee been abuurka ah badankoodu kuu oggolaanayaan inaad dib u isticmaasho illaa 10 jeer, 25mm mink indhashareerka beenta ah ayaa si taxaddar leh loo farsameeyay oo loo adeegsan karaa muddo dheer, 30 jeer oo la isticmaalo, iyada oo aan lumin soo jiidashadooda.
√ Jilicsan oo raaxo leh in la xidho
Indhahayaga mink-ka ee dabiiciga ah ayaa ka samaysan suuf, aad u fudud in la isticmaalo, jilicsan oo dabiici ah taabashada, yaraynta raaxo-darrada xirashada indhashareerka beenta ah.
Xoog badan oo aan sahlanayn in la libdho
Baakado fiican iyo summad caadadeed
Noocyo kala duwan oo diyaarsan oo diyaarsan
Baakadaha baalasha baalasha:
1, Baakadaha indhaha oo diyaarsan, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa habka daabacaadda UV
Daabacaadda UV waa habka daabacaadda oo u isticmaala iftiinka ultraviolet si uu u qallajiyo una daaweeyo khadadka. Waxaa lagama maarmaan ah in la isbarbar mariyo khad ay ku jirto sawir -qaade oo leh laambad lagu dawayn karo UV.
2, Baakadaha baalasheeda ee la habeeyay, waxaan taageernaa habka daabacaadda ee kala duwan
Calaamadda khaaska ah ee ku habboon baakada, sida caadiga ah waxaan taageernaa daabacaadda shaashadda xariirta, daabacaadda UV, kuleylka kuleylka iyo wixii la mid ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad noo sheegto saamaynta aad rabto, markaa waxaan u samayn karnaa sida saxda ah ee lagaa rabo.
Daabacaadda Kulaylka Kulaylka
Sida loo dalbado jeedal been ah?
Ka saar baalasheeda beenta ah ee aad rabto inaad ka xirto sanduuqa oo sanduuqa ku kaydi kaydinta sahlan isticmaalka kadib.
Isticmaal maroojiyaha indhashareerka si aad uga saarto indhashareerka beenta ah ee saxarada.
Ku cabbir karbaashyada saldhigga xariijinta karbaashka dabiiciga ah.
Hore: Khaanadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Khaaska ah Jumlada qalafsan 25mm Muraayadaha Mink
Xiga: Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada ah 100% Gacan -ku -samayska Xad -gudubka 3D ee Mink Indhaha
25 M Mink baarkooda
Super soo jiidasho leh 100% Hand Made 3D 25mm Color Min ...